#Liverpool oo heshiis caalami ah ka saxiixatay ciyaaryahan Soomaali ah - Get Latest News From Horn of Africa
#Liverpool oo heshiis caalami ah ka saxiixatay ciyaaryahan Soomaali ah
By WARIYAHA CAALAMKA On Jun 27, 2019 Last updated Jun 27, 2019
Cabdi Shariif ayaa noqonay Soomaaligii ugu horeeyay ee qandaraas noocaas ah ka helay Reds, inta la og-yahay | Photo: LFC
LIVERPOOL, UK – Kooxda horyaalka heerka koowaad ee Ingiriiska ka xamaalata ee Liverpool ayaa Khamiista maanta ah shaacisay in ay qandaraas caalamka ah ku abaalmarisay Cabdi Shariif, oo ah ciyaaryahan Soomaaliyeed.
Naadigan sanad ciyaareedkan kaalinta labaad kaga dhameystay tartanka Premier League ayaa waxa aysan soo bandhigin mudada sanada ah ee uu qalinka ku duugay laacibkan ka dheela khadka dhexe.
18-sano jirkan oo tababar la qaadanayey kooxda nagu naaneeso Reds-ka tan iyo markii ay da’diisu ahayd saddex sano jir ayaa waxa uu si rasmi ah uga mid noqday kooxda saddex sano kadib.
Cabdi ayaa ku dhashay Soomaaliya balse waxa uu ku barbaarey degmaddaToxteth oo ka tirsan magaalaa Liverpool, cariga Boqortooyadda Ingiriiska.
Xagaagii hore, Shariif ayaa laf-dhabar u ahaa kooxda ay da’dooda ka hooseyso 18-jirada ee Liverpool, isaga oo ka caawiyey guulo kala duwan oo ay gaartay.
Kama dambeysta tartanka FA-ga gaar ahaan midka dhalinyaradda ayuu safka hore kasoo muuqday, isaga oo dhaliyey gool ku laad, ka caawisay Liverpool in ay koobkaasi qaado markii ugu horeysay 12-sano kadib.
Manchester City ayay ka faromaroojiyeen koobkaasi.
Shariif ayaa kulankiisii ugu horeeyay waxa uu u saftay kooxda ciyaartoyda ay da’doodu ka hooseyso 23-jir bishii Janaayo, isaga oo goolkiisii ugu horeeyay ee heerkaasi ka dhaliyey Chelsea bishii April.
“Marki hore khadka dhexe inaan ka ciyaaro ayaan ciyaaraha laakin marki dambe waa la iga wareejiyey” ayuu yiri
“Khadka dhexe inaan ka ciyaaro ayaan anigu jecelahay waa haddii ay kooxda ku qanacdo sida aan u ciyaaro. Aniguse mar weliba diyaar Ayaan u ahay inaan khadka dhexe ka ciyaaro” ayuuna sii raaciyey.
“Marka aad carruur tahay iyo marka aad soo weynaatidba waxa aad marwalba ku taameysid waxaa weeyey inaad kooxda Liverpool oo aad ka baxdidi kooxda dhlinyarada. Waana waxa ugu wanaagsan ee aan ku taamayo” ayuu shariif hadalkiisa ku soo afmeeray.
Sikastaba ha noqotee, Cabdi Shariif ayaa waxa uu ku biirayaa liiska ciyaartoyda Soomaalieed ee ka tirsan kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriiska, inkasta aysan gaarsiisaneen heer ay EPL-ka kaga soo muuqdan.
Cayaaraha ayaa loo arkaa halka kaliya marka laga soo tago waxbarashada ee dhalinta Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool si gaar ah UK ay kaga fogaan karaa fal-dambiyeed sida dilal tooreyda oo sanadihii u dambeeyay batay.